SOOMAALIYA RABBI OO UMAQANMOOYAANE RAG UMA MAQNA!!!!!!!!
Salaanta islaamka kadib aniga oo ah gabar soomaaliyeed magaceeyguna Yahay Ladan Abdi waxaan bahda somalitalk kacodsanayaa ineey fariinteyda galiyaan taasoo ku socota dowlada kumeel gaarka ah gaar ahaan (Maxweeynaha).
Maalintii ugu horeysay een maqlay soomaaliya dowlad ayay yeelatay farxadii aan faxay ma aanan qiyaasi karin. Runtii maantana aad ayaan ooga xumahay in madaxweeynaha uu ku taageero inuu geedi wadanka keeno axmaaro iyadaba teeda meel u la, mida kale war hadaad idunku dowladey umada utalin weeydeen ma xaad ugu yeeri weeyden dowladaha kale ee aduunka intaad uyeeraysaan axmaaro daafileey. Horay soomaali ugu maahmaaday tiisa daryeelaa tukale kudara oon oola jeedo axmaarada haddii aay faa'iido leedahay waxeey marka hore wax uqaban laheeyd umadeeda gaajada iyo cuduradu dileen ayey wax uqaban laheeyd marka iyadaaba tabarucaad uga baahan aduun weeynaha.
(Geedi) Adigu horta waxbaa isaga kaaqasan oo ah dowladnimo iyo dagaal. Hadaba dowladmarka laguudoorto waxaa lagaaga baahan yahay inaad shacabka wixii aad kudajinkarto aad falkeeda gasho maadan sameeynine ileen waxaad fahansan tahay dagaale kii unbaad dabada qabatay. Hadaba haddii aay sheekadaadu tahay dowladnimo marabo ee dagaal ayaan rabaa, umada soomaaliyeed weey daaleen ee fadlan hanastaane kadaa dagaalka, mida kale cimrigaa madagaal unbaad kujiri cibaadadana kudar. Mahadsanidin.